Dochie Search WordPress na Google Custom Search | Martech Zone
Ka anyị chee ya ihu, WordPress Search dị nwayọ na ezughi oke. Obi dị m ụtọ, Google na-enwusi ọkụ ma na-agba ọsọ. Na mgbakwunye, Google si Nchịkọta Omenala Google emeela ka ọ banye n'ime blọọgụ gị (ma ọ bụ weebụsaịtị).
Permalinks na Omenala Google Search
Maka saịtị nwere permalinks dị ka nke m, ekwesịrị m ime mgbanwe ọzọ, n'agbanyeghị. Ekwesịrị m ime ihe na ụdị mkpado ahụ karịa ịnye URL niile na ngalaba.
Nchọgharị Omenala Google nwere atụmatụ ọzọ mara mma will ọ ga-adọta onyonyo ahụ egosiri ma ọ bụrụ na saịtị gị na-etinye ha n'ọrụ ma ị were isiokwu kachasị nke ọma iji microdata dabere na ya schema.org. M ahu nagide Yoast WordPress SEO ngwa mgbakwunye ilekọta nke ahụ - ma etinyere saịtị m yana onyonyo egosipụtara maka ọkwa ọ bụla.
Mee Mpempe Nsonaazụ Nchọta
Chọọ rịzọlt: [Tinye koodu Nlekọta Ọchụchọ Google nke Google Ebe a]
Ugbu a, mgbe ị gbakwunye peeji ọhụrụ maka nsonaazụ gị, họrọ nke a dị ka ndebiri:
Agaghị m egbu oge ime nke a na blọọgụ ọ bụla - ọ bụghị naanị maka mmụba ọkụ na ọsọ kamakwa maka nsonaazụ ndị dị mkpa. I nwedịrị ike ịme ego ole na ole n'akụkụ! Lelee onwe gi anya ma nye m ụdị nchọta ọhụụ maka ntụgharị! Won't gaghị enwe mmechuihu!
Tags: google csegoogle cse wordpressgoogle +isiokwuiri abụọ na otuiri abụọ na otuwordpress csewordpress google cse
Sep 16, 2008 na 12: 59 AM
Enwere m Google Omenala Nchọgharị na blọgụ m ogologo oge ugbu a. Agbanyeghị, ana m emeghe nhọrọ abụọ ahụ.